Agaghị enwe mmelite maka Samsung Galaxy S7 | Gam akporosis
A gaghị enwe mmelite maka Samsung Galaxy S7
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Noticias, Samsung
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị nke ahụ Samsung Galaxy S7 natara mmelite nche. Na eziokwu bụ na Samsung na-echekwa okwu ya na nkwado na mmelite. Dị ka a na-achị, ya n'elu igwe na-aga n'ihu na-enye mmelite sistemụ maka 2 afọ mgbe mmalite. Na-ajụkwa nche mmelite, a gbasaa ruo afọ 4s.
Ọfọn, nke a mmelite nche anyi na ekwu maka onwa mbu bu nke ikpeazu. Kemgbe mmelite a, dị ka anyị tụrụ anya, Samsung ewepu Galaxy S7 na kwa S7 Edge na ndepụta nke “upgradeable”. Ọ na - eme, dị ka anyị na - ekwu, na - edebe okwu ya ebe ọ bụ na S7 emechala afọ 4 kwekọrọ.
The Galaxy S7 na S7 Edge na-enweghị nchebe nchedo
Mmelite nche na-adịbeghị anya nke ndị a natara ga-eme ka sistemụ arụmọrụ gị rụọ ọrụ nke ọma ruo ọtụtụ ọnwa. Nke a mmelite nye ndi oru udo nke uche mgbe ị na-eji ngwaọrụ gị. Nche patch na guputa ma dozie nsogbu ụfọdụ achọpụtara na usoro nchekwa nchekwa oge niile. Na na site ugbu a gawa, ha agakwaghị anọ na Galaxy S7 ma ọ bụ S7 Edge.
Agbanyeghị, dị ka na-ama mere na oge, Samsung anaghị eleghara ihe arụ ọrụ anya ọ bụrụgodị na ha dị afọ anọ. Ọ bụrụ na o bilie ụfọdụ nnukwu nsogbu nsogbu, ọ dị ihe puru omume na Samsung nyefere nkedo iji dozie nsogbu ahụ. Nke a ga-emekwa nanị iji dozie nsogbu ahụ. A ogbugbu na-ekele maka, karịsịa maka ndị jikwaa ịgbatị bara uru ndụ nke a smartphone ukwuu.
The Galaxy S7 na S7 Edge hapụrụ na kacha ọhụrụ na gam akporo 8 Oreo, ya na njiri aka ya kwekọrọ na nke aha aka mbinye aka. A mbipute nke gam akporo nke ndị ọrụ kwadoro nke ọma na nke ahụ emebeghị agadi na ọdịdị ma ọ bụ arụmọrụ. Na ọnwa ole na ole hapuru mmelite na gam akporo 9, nke ga - eme ka ha bụrụ ekwentị ndị ọzọ dị ugbu a. You chere afọ 4 bụ oge kwesịrị ekwesị iji nweta mmelite?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A gaghị enwe mmelite maka Samsung Galaxy S7
Ihe ọhụrụ beta nke Samsung Internet, na-agbakwunye ndozi iji gbochie nsuso
Oppo Find X2 Lite na-ekpughe onyinyo ya na nkọwa ya